Mohamed Abdiaziz - Page 3 of 3 - Qoraal iyo Maqaalo kooban - Brief and Concise Articles
Teknooloojiyadda Mustaqbalka iyo Xorriyadda Dadka
Qoraalkaan waa tijaabo horudhac u ah qoraallo kale oo soo socda dhawaan.
Teknoolajiyaddu meesha ay maanta marayso meel kasii qotto dheer ayay gaari doontaa. Dadkuna waxay filan doonaan oo kaliya [tekoonalajiyadda horrumarka xawaaraha sare ee ay ku socota awadeed] in cadhiidhi mooyaane aysan ku nafisi doonin, sababtoo ah macloomaadkooda shakhsiga ah ayaa la aruurin doonaa tin ilaa cirib sida lanbar sireeda akoomada bangiyada, telafoonada, kumbuyuutarada, mawqifka siyaasiga iyo diiniga ah iwm, wax qarsoodiah oo maxram shakhsi ah masii jiri doono. waxaa soo bixi doona shirkaddo iyo muasasaad ka ganacsadda inay dhawraan xaquuqdaas dadka la duudsiiyay.
Continue reading Teknooloojiyadda Mustaqbalka iyo Xorriyadda Dadka
Posted on November 8, 2017 November 10, 2017 Categories TechnologyLeave a comment on Teknooloojiyadda Mustaqbalka iyo Xorriyadda Dadka
Waxaa inta badan la arkaa in dadku isla wadaagaan oo isku sheegaan nooca ahdaafta shaksiga ah ee ay damacsanyihiin inay xaqiijiyaan, sababo kale duwan ayaana keenaysa in ay iskugu sheegaan, waxaa dhici karta in :
Midkood uu rabo inuu dhiiro galin iyo niyad dhis kahelo kuwa uu markaas uu wax u sheegayo, si uu sare ugu qaado dadaalka uu ugu jiro hadafkiisa;
Inuu kahelo gacan dhaqaale si uu ugu xaqiijiyo hadafkiisu haddii uu yahay mid markaas kharash maaddi ah ubaahan;
Inuu ku qasban yahay inuu sheego, waayo waxaa ku xariira waalid iyo xigto la xisaabtan uga baahan oo meesha uu tiigsanayo rabaan inay ogaadaan;
Halka mid kale uu ka leeyahay ujeedo istus iyo faan iyo si uu qofka horfadhiya utuso inuu yahay qof hammi iyo ujeed usocda leh ee aan madhnayn (balse uu asal ahaan jirin wax uu markaas lajoogo oo aan hadal ka ahayn); iyo kuwa kale oo badan.
Continue reading Ujeedada Daahsoon
Posted on October 13, 2017 December 9, 2017 Categories Maskax gaagax1 Comment on Ujeedada Daahsoon
Xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan
“Mararka Qaar Dabayshu waxay usocotaa sida aysan Doomalaydu rabin (kaluumaystada ama gamacsatada Badda).
Waxaa Suurta gal ah in had iyo goor uusan rabitaankaagu kuugu suurtagalin sidii saxda ahayd ee aad udamacsanayd, balse Si sidaas liddi ku ah ay wax udhacaan.
Ma isweydiisaa marar badan nafsad ahaantaada su’aalo badan oo ay usoo horeyn karaan:
1- ma nasiib laawe ayaan ahay oo waxkasta sidaas ayay iiga halaabaan?
2- Ma towfiiqda ayaa si iga ah (waafiqidda sida aad wax urabto) oo aan waxkasta kuwaayaa?
Continue reading Xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan
Posted on August 4, 2017 August 4, 2017 Categories Maskax gaagaxLeave a comment on Xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan
Dhaan Dabagaale (Dabo-Geelle) Ha Dhaaminin
Qoraa ree Masaari ah oo wax ka qori jiray Culuumta loo yaqaan “Cilmi Nafsiga”, ayaan xasuustaa inaan mar akhriyey mid kamid ah Buugaagtiisa, anoo markaas ahaa ardey dhigta fasalka 6aad, mudadaas oo hadda laga joogo muddo 8 sano ah, Waxaa jiray sadaro aad ii cajab geliyey markaas oo aan su’aalo badan iska weydiiyay ilaa maalinka maanta ahna aan weli sidii si lamid ah uga fikiro, Erayadaas oo ahaa:
o نرى ما لا نريد ونريد مالا نرى، فنفقد قيمة ما نرى ونضيع في سراب ما لا نرى، “كن حريصا ألا تفقد قيمة ما ترى
Continue reading Dhaan Dabagaale (Dabo-Geelle) Ha Dhaaminin
Posted on August 4, 2017 August 4, 2017 Categories AkhriLeave a comment on Dhaan Dabagaale (Dabo-Geelle) Ha Dhaaminin
2016 – Xasuustii sanadkii tagay
Shakhsiyaad Xusid mudan:
1. Dr. Ahmad Ghazawneh
Ahaa Ardey kasoo haajiray magaalada Qudus ee Dhulka Falastiin isagoo aqoon raadis ah, haddana kusugan Wadanka Sweden isagoo Dr dhalinyar ah (Ph.D Holder), Kasheekeeya had iyo goorna kahadla Noloshii adkeyd ee uu soo maray iyo siduu uga tilaabsaday, Wuxuu Dr. Ahmed caan kuyahay Maqaallo xamaasad iyo dhiiro galin kudheehan, Laakiin badanaa uu kudaabaco afka carabiga.
Qoraaladiisa baaritaan cilmiyeedka :
Continue reading 2016 – Xasuustii sanadkii tagay
Posted on August 4, 2017 December 9, 2017 Categories XasuusLeave a comment on 2016 – Xasuustii sanadkii tagay